कोरोनाले महिलाको मृत्यु प्रमाणितपछि धुलिखेलमा उच्च सावधानी, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टाइनमा – Health Post Nepal
कोरोनाले महिलाको मृत्यु प्रमाणितपछि धुलिखेलमा उच्च सावधानी, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टाइनमा
२०७७ जेठ ३ गते १६:२६
कोरोना संक्रमणबाट सातजनाको मृत्यु
पाटन अस्पतालमा कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु
धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना पुष्टि भएपछि अस्पतालमा उच्च सावधानीका अपनाइएको छ । अस्पतालका प्रवक्ता डा. सुमन ताम्राकारका अनुसार मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना पोजेटिभ प्रमाणित भइसकेको छ ।
ती महिलाको विहीबार मृत्यु भएपनि शुक्रबार सबै परीक्षण गरेर शनिबारमात्रै अस्पतालले त्यसको जानकारी गराएको थियो ।
मन्त्रालयको विशेषज्ञ टोलीले अस्पताल पुगेर सबै परामर्श र निरीक्षणपछि केहीबेरमा औपचारिक विज्ञाप्ति जारी गरेरै घोषणा गर्ने भनेको डा. ताम्राकारले जानकारी दिए । तर हामीले यहाँ गर्नुपर्ने सबै सावधानी र काम सुरु गरिसकेका छौ । डा. ताम्राकारले भने ।
डा.ताम्राकारका अनुसार महिला एस्पोजर भएका कोठा, प्यासेजलगायतका ठाउँमा धुवाँमार्फत् कीटाणु मारेर निसंक्रमण गर्ने काम सुरु गरिसकिएको छ । त्यसैगरी मृतका आफन्त, नवजात शिशु र उपचार संलग्न चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइनमा पठाइसकिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले भने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा महिलाको नमूनाको थप परीक्षण सकिएपछि औपचारिक जानकारी गराउँने बताए । उनले वैशाख २३ गते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकी बाह्विसेकी २९ वर्षे महिलाको २४ गते नर्मल डेलिभरी भएको र २५ गते डिस्चार्ज भएको बताएका छन् ।